Wasiiro iyo xilibaano ka tirsan Barlamanka dalka oo ka shiray joojinta dagaalka Marka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 26, 2013 6:03 b 0
Afgooye, July 26, 2013 – Gobolka shabeelaha hoose ee koonfurta dalka weli waxaa ka aloosan xiisad dagaal oo u dhexeyso beelo wadda degan magaalada marka ilaa Ceel-madoobe inta u dhexeysa, dagaalka ayaa saan saantiisa waxaa laga dareemayey gobolkaasi maalmihii tegey.
Wararka ay Radio Daljir ka helayso Marka waxay sheegayaan in halkaasi uu xalayto mar kale ka qarxay dagaal u dhexeeya beelo shalayto ku dagaalamay deegaanka Ceel-madoobe oo ku dhow magaalada Marka ee xaruunta gobolkaas.
Magaalada Muqdisho ee xaruunta dalka xalayto waxaa ka dhacay kulamo kala gedisan, waxaana dhinac ku shiray wasiiro ka tirsan Dowladda oo uu ku jiro wasiirka arimaha gudaha Cabdikariin xuseen Guuleed iyo qaar ka tirsan xilibaanada gobolkaasi shabeelaha Hoose ka soo jeeda.
Madaxda kala duwan ee shirkaasi looga hadlay arimaha Marka ka qeyb galay, waxay sheegeen in go?aan lagu gaaray in dowladdu taalbo buuxda ka qaado arimaha halkaasi ka jira, isla markaasna jidka nabbada loo dhaqaaqo, Dowladdu waxay shirkaasi ku sheegtay in arintu ka kacday maamul xumo gobolka ka jirta.
Mudane Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Xilibaanadii ka qeyb galay kulankaasi oo saxaafada la hadlay, wuxuu sheegay in shirka aad loogu gorfeeyey sidii loo qaboojin lahaa xaalada ka taagan gobolka shabeelaha hoose, iyo dagaalka u dhexeeya beelaha wadda degan magaalada Marka,isla markaasna la dhameeyo khilaafka dhanka maamulka ee halkaasi ka jira.
Dhegeyso Mudane Mahad oo ka hadlaya nuxurka shirkii wasiirada iyo xilibaanada ay yeesheen.
Dowladda Soomaaliya Oo hir-gelinaysa Bankiyo cusub oo ka shaqeyn doona howlaha ganacsiga